पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ ! चित्त बुझे एक शेयर गर्नुहोला – " सुलभ खबर "
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ ! चित्त बुझे एक शेयर गर्नुहोला
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ ! चित्त बुझे एक शेयर गर्नुहोलापुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट समान भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील, सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् । पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद सारा चुनौती चिरेर पनि नेपाली महिला उच्च पदमा पुग्न सफल छन् ।
हिलामा भएका यस्ता गुण, क्षमता एवं विशेषताले उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाएको छ ।तपाईं महिला नै हुनुपर्ने कारण के हो ? म महिला नै हुनुपर्ने एउटै मात्र कारण छैन । शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक रूपमा म महिला हुँ । मभित्रको विचार, व्यवहार, धैर्य, सहनशीलता अनि ममता नै म महिला बन्नुपर्ने कारण हुन् ।
घरपरिवार, बालबच्चा, कार्यालय मात्र होइन देश हाँक्ने र सम्हाल्ने हरेक महिलाले पुरुष भएको अनुभूति गर्न सक्छन् तर हरेक पुरुषले आफूलाई महिला अनुभूति गर्न गार्‍हो छ । संसारमा लि· भेद किन भएको होला ? संसारका जुनसुकै कुनामा गए पनि पुरुषत्व हाबी छ । जस्तोसुकै विकसित मुलुक र उच्चशिक्षित महिलामा पनि कुनै न कुनै रूपमा विभेद कायमै छ चाहे त्यो अदृश्य नै किन नहोस् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ महिलाहरू कति साहसी छन् ?
पुरुषहरू सदैव महिलाको शक्ति र क्षमतासँग डराउँछन् । पछिल्लो समयमा महिला दमन, हिंसा र विभेदका बाबजुद पनि शक्तिमा आउन थालेका महिलाको शक्ति र क्षमतासँग डराएर संसारभर नै लिङ्गभेद हुँदै आएको हो ।पुरुषविना महिलाले मात्र संसार चल्छ ? पुरुषविना महिलाको संसार अघि बढ्न सक्छ तर महिलाविना पुरुषको संसार अघि बढ्न सक्दैन ।
आज सामान्यतया मौसम सफा रहने
काठमाडौं । आज देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान
आफ्नो पार्टनरलाई आजै भन्नुहोस् यी कुरा
जीवनमा आइपर्ने कतिपय समस्या वा दैनिक जीवनका कार्यलाई आफ्नो पार्टनरलाई जानकारी नगराउने बानी वा स्वभाव
कुनै एक व्यक्तिले चाहँदैमा पार्टी फुट्न सक्दैन : माधव नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले नेकपालाई कसैले विभाजन गर्न
हराएको मोबाइलबाट फोटो दुरूपयोग होला भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ हटाउने तरिका
काठमाडौँ- मोबाइल हराएमा तपाईँ हामलाई अर्को खरिद गर्नु पर्ने चिन्ताले मात्र सताउँदै । हराएको मोबाइलमा
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भेगमा आज हल्का पानी पर्ने
काठमाण्डाै – कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भेगमा आज हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल
महिला र पुरुष एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुन् कुनै एक बिना संसार चल्नै सक्दैन
महिला र पुरुष धेरै असमानता छ, केही कुरा समान छन् । जस्तो जीवन बाँच्ने प्रक्रिया
मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन…के गर्ने होला
बडिगार्ड तैनाथ गरेर बिहे गर्दै श्वेता खड्का, मिडियालाई फोटो /भिडियो खिच्न निषेध ?(हेर्नुहोस भिडियो)
श्रीमान लामो समयदेखि मलेसियाबाट नफर्किएपछी श्रीमती भागिन प्रेमीसँग (भिडियो)
यस वर्षको मिस नेपालको उपाधि नम्रतालाई